मौलिकता जोगाउने उत्कृष्ट स्थल बन्दै घरबास -केसब बडाल - ParyatanBazar.com
मौलिकता जोगाउने उत्कृष्ट स्थल बन्दै घरबास -केसब बडाल
पर्यटन बजार२२ पुष २०७७, बुधबार मा प्रकाशित
पुष २२ ,काठमाडौं। होमस्टेको छुटै विशेषता छ । आनन्द छ । महत्व छ । होमस्टेमा पाहुना बनेपछि स्थानिय समाज, रहनसहन, संस्कृति, बोलीचालीलाई नजिकबाट साक्षतकार गर्न पाइन्छ । त्यस्तै, यसमा आत्मियता पनि मिल्छ । एउटै परिवार जस्तै भएर बस्न सकिन्छ । तर कोरोनाले सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रसंगै घरबास क्षेत्रलाइ समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ। प्रस्तुत छ कोरोना ले होम स्टे क्षेत्रमा पारेको असर को बारेमा पर्यटन बजार ले होमस्टे (घरबास) एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष केशब बडालसंग गरेको कुराकानी :
कोरोनाले असर सबै नै क्षेत्रम पारेको छ , होमस्टे ब्यबसायमा परेको असर लाई कसरि लिनुभएको छ ?
पक्कै पनि कोरोनाले नेपाल देखि विदेश सम्मै ठुलो असर पार्यो। नेपाललाई र नेपालको पर्यटनलाई असर नगर्ने त कुरै भएन। होम स्टे ब्यबसायमा हामीले सोचेको भन्दा बढी नै असर पनि गरेको छ। करिब ७ महिना त ब्यबसाय शुन्य मै थियो अहिले चाही केहि मात्रामा होम स्टे ले गति लिन सुरु गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु नआए पनि अन्तरिक पर्यटक कै कारण पनि होम स्टेमा केहि पर्यटकहरु पुग्न थालेका छन्। कोरोना एक महामारी बनेर आयो , यसले हामीलाई जस्तो सुकै समयमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ , आत्तिनु हुदैन , धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ।
हाल आन्तरिक पर्यटकले होम स्टे संचालनमा आएका छन् , जव कि कोरोना अघि ब्यबसायीले बाह्य पर्यटकलाई बढी ध्यान दिइने गरेको पाइन्थ्यो , अब सबै पर्यटकलाई समान व्यवहार होला त ?
होम स्टे खास भने आन्तरिक र लोकल पर्यटकको लागि नै हो। बाह्य पर्यटक पनि होम स्टेमा बस्न रुचाउनु नै हुन्थ्यो र होम स्टे ब्यबसायीहरु पनि बाह्य पर्यटक देख्दा बढी खुशी हुने कुरा सत्य हो। यसका पनि आ आफ्नै कारण होलान तर अहिलेको समय अन्तरिक पर्यटककै कारण यो निराशाको समयमा पनि केहि आशा पलाएको छ। तत्कालै बाह्य पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ , जसले गर्दा हामीले अन्तरिक पर्यटक मै निर्भर रहनु पर्ने अवस्था छ। अवश्य पनि ब्यबसायीले बुझ्नुहुनेछ, बाह्य पर्यटक अतिथि हुन् भने देशका आगन्तुकहरु सदाबहार अतिथि हुन् भनेर !
कोरोना र लक डाउनको बिकराल अवस्थामा होसानले ब्यबसायीको हक हितका लागि कस्तो काम गर्यो ?
लक् डाउनको पूर्वसन्ध्यामा हामीले चाहीं कृषी विकास बैंक र साकोस संग मिलेर होम स्टेको प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएका थियौं। जुन योजनाहरु कोरोना कै कारण छायाँमा परे। त्यसपछि हामीले सबै ब्यबसायीलाइ चाहिं होम स्टेमा केहि पुनर्निर्माण , रंगरोगन लगायत केहि हेरफेर गर्नुपर्ने काम भए यै समयमा गर्न सुझायौं। जस अनुसार धेरै साथीहरुले होम स्टेलाई सुन्दर बनाउने काम पनि गर्नुभयो। संग संगै अन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन पनि हामीले आग्रह गर्यौं। कोरोना कै कारण धेरै होम स्टे कर्मीहरु आत्तिन्नु भएको थियो , यो पेशाले अब बाँच्नै पो गाह्रो हुने हो की भनेर डर मान्नु भएको थियो। हामीले वहाहरुलाई केहि समय धैर्य गर्न हौसला प्रदान गर्ने काम पनि गर्यौं , यो व्यवसायले जीविकोपार्जन हुन्छ , केहि महिना समय दिनुस भनेर सम्झाउने काम पनि गर्यौं। विदेश जाने अथवा अन्य विकल्प नसोची केहि समय पर्खिनुस भन्ने हाम्रो आग्रह लाइ वहाहरुले सहज रुपमा लिनुभयो। वहाहरुले धैर्य किन पनि गर्नुभयो भने होम स्टेमा धेरै लगानी भएको हुँदैन। आफ्नो भइ रहेकै घरको २/३ ओटा कोठालाई सफा र चिटिक्क पारेर चलाउँने हुँदा कसैलाई भाडा तिर्नु पर्ने बाध्यता पनि भएन संगै कर्मचारीलाई तलब दिने लगायतको खर्च पनि होम स्टे मा कम नै हुन्छ। जसले गर्दा होम स्टे कर्मीहरु अहिले सम्म टिकी रहनु भएको छ र पछिल्लो समय होम स्टे मा थोरै भए पनि चहल पहल बढ्दा वहाहरुले खुशी पनि म,मान्नु पनि भएको छ।
बिदेशी पर्यटक कहिले सम्म नेपाल भ्रमणमा निस्केलान त ?
यति नै समयमा बाह्य पर्यटक हरु नेपाल औलान भन्ने अवस्था छैन। नेपाल सरकारले नै पनि अहिले यस्तो आश नगरेको अवस्थामा हामीले पनि ठुलो आश गर्नुहुँदैन। तर धेरै पर्यटक हरुको मेसेज आउन थालेको छ , तपाईहरु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ , नेपालको अवस्था के छ , फ्लाइटहरु खुल्यो कि छैन , कहिले सम्ममा नेपाल आउँदा हुन्छ लगायतका प्रश्न हरु धेरै सोधिन थालिएको छ। नेपाल आउन लालायित पर्यटक देख्दा कोभिडको महामहरी सामान्य र फ्लाइट हरु सजिलो गरि खुल्न थालेपछि पर्यटक को आगमन सुरु हुने हामीले आशा गरेका छौं। उसो त हाल आन्तरिक पर्यटक हरुको चहलपहल राम्रै छ , प्रसिद्द ठाउमा दिनमा ८/१० हजार पर्यटक हरु पुग्न समेत थालेका छन्। यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो।
भ्रमण बर्षको उत्साह पनि कोरोना कै कारण खल्लो बन्यो वा भनौ स्थगित बन्यो , यस बाट होम स्टे ब्यबसायिहरु कतिको निरास बन्नु भयो ?
भ्रमण बर्षको उत्साह एकदमै थियो , हाम्रो तर्फबाट पनि भ्रमण बर्षको तयारी भएको थियो। होम स्टेमा नयाँ पन दिने,स्थानीय उत्पादन बढाउने, कोठाको संख्या, बेडको संख्या बढाउने काम पनि भएका थिए। हर्सौल्लास छाएको थियो सबै तिर तर कोरोनाले भ्रमण बर्षलाई नै विफल बनाइदियो। हामी पनि निराश बन्नु स्वाभाविक थियो तर यो कसैको इच्छा ले नभएर एक महामारीले गर्दा भएको थियो जसलाई हामी लगायत विश्वले नै भोग्नुपर्यो त्यहि सोचेर नै ब्यबसायीले मन बुझाउनु भएको छ।
जनशक्ति पाल्न गार्हो भो ,घर भाडा तिर्न गार्हो भयो , ऋण तिर्न गाह्रो भयो सहुलियत चाहियो लगायतका धेरै गुनासोहरु छन्, रेस्टुरेन्ट ब्यबसायी, होटेल ब्यबसायी लगायत अन्य ब्यबसायी ले राम्रो लोकेशन मा महँगो भाडा तिरेर आफ्नो ब्यबसाय सुरु गर्नुभएको छ, उहाहरुका आफ्नै गुनासा होलान तर हाम्रो गुनासो अलि पृथक छ। हाम्रो त्यस्तो गुनासो किन छैन भने होम स्टे आफ्नै घरमा, घरका दिदीबहिनी आमा को सिप प्रदर्शनी , कला र गलाको प्रदर्शनी , दाजु भाइको बालन गायन शैली , लोपन्मुख बाजा शैली बाट चलेको थियो र आगामी दिनमा पनि यिनै स्थानीय , संस्कृतिक , प्राकृतिक कुरा बाट नै होम स्टे चल्ने छन्।
हाम्रो गुनासो भनेको पर्यटन लाइ शहरी क्षेत्रम , चर्चित केहि क्षेत्रम सिमित नराखेर दुर दराजका ठाउँ सम्म फैलाउनु पर्छ भन्ने हो। होम स्टे खुलेका ठाउ हरु आफै मा सुन्दर छन् , साँस्कृतिक छन् र धार्मिक पनि छन् , ति स्थानको प्रचार प्रसारमा मद्दत गरियोस। बिभिन्न जातजातिको संग्रहालय बनाउने काम हाल सुरु भएको छ यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइयोस। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थानमा बाटो घाटो निर्माण गरि पर्यटकलाई पुग्न सहजता प्रदान गरियोस। विकास होस् तर बिनास हुने तरिकाले विकास नहोस भन्ने हाम्रो अर्को गुनासो छ।
आगामी दिनमा होम स्टे ब्यबसाय लाइ ब्यबस्थित , मर्यादित र सुरक्षित बनाउन होसानले कस्तो भूमिका खेल्नेछ ?
हामीले केहिदिन अघि मात्र चितवनमा केन्द्रिय सदस्यको बैठक गरेका छौं। नचलेका होम स्टेलाइ सुचारु गर्नुस भनेका छौंभने चलिरहेका होम स्टेहरुलाई सेवा अझै प्रभावकारी बनाउन र अझै स्तरीय तरिकाले अघि बढ्न आग्रह गरेका छौं। किन भने हाल ठुला होटलहरुले समेत अन्तरिक पर्यटक लाइ आकर्षण गर्न तर्फ लागिरहेका छन्। त्यसैले हामीले पनि सेवा दिनमा कन्जुस्याइ गर्नु हुदैन। हामीले २/३ ओटा कारणले भोलिका दिनमा पनि होम स्टे को भविष्य अत्यन्तै राम्रो देखेका छौं। एउटा हो प्रकृति , अर्को हो संस्कृति र धार्मिक स्थल। दूरदराजका स्थानमा त्यहाको जीवनशैली र प्रकृति मा रमाउन जान चाहने अन्तरिक संगै बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने हाम्रो आंकलन छ। त्यसैले हामीले होम स्टे सबै सुगम देखि दुर्गम स्थल सम्मै खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं।
होम स्टे मा मौलिक पन हराएकै हो त ?
मौलिक पन केहि मात्रामा हराएकै हो भन्न सकिन्छ। होम स्टे कर्मीहरुले खरको छानो , रातो माटो , अगेनो जस्ता कुराको बिकल्पमा कंक्रिट को घर , ग्याँस चुलो आएकै छ। हामीले पर्म्पॉरगत संगै आधुनिक शैलीमा त जानै पर्छ। हामीले खरको छानो नै हाल भनेर विकास गर्न पो रोकेको हो कि जस्तो पनि देखिदो रहेछ तर हाम्रो परम्परागत शैलीलाई बिर्सेर भने विकास नगरौं । मौलिक पन हराउनुमा अलिकती भुकम्पको पनि हात रहेको छ। हाम्रा जति पनि परम्परागत शैलीका घरहरु थिए ९९ प्रतिशत ति घरहरु ७२ सालको भुकम्पले भत्किन पुगे।
कुनै एक संरचना चाहिं तयार गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ,जस्तो कि यो चाहिं हाम्रो जिजु बजे कै पालाको संरचना(माटो र खरले छाएको घर ,चुलो , ढिकी जाँतो , घट्ट आदि ) हो भन्ने होस्। जहाँ हाम्रा भाबी सन्ततिले अध्यन गर्ने थलो बनोस र बिदेशी पर्यटक ले नेपालको इतिहास देख्ने मौका पाउन। तर अहिले एकाध त्यस्ता संरचना तयार पार्न पनि मुस्किल जस्तो बन्न थालेको छ। यद्धपि केहि कुरामा मौलिक पन थपिएको पनि छ। पहिला पहिलामेल पातमा जाँदा पात बजाउने , दोहोरि गाउने ,झ्याउरे गाउने , बाजागाजा बजाउने बिचको समयमा हराएको थियो। आजभोली यी कुराहरु होम स्टेमा देख्न सकिन्छ। केहि कुराहरु सम्झना मा मात्र रहने भए भने केहि चिन्झारू संग्रहमा रहन्छन ,कुनैकुरा हरु उजागर हुन्छन र केहि कुराहरुको प्रवर्द्धन समेत भए। त्यस्तै रासायनिक बाट हामी बिस्तारै प्राङ्गरिक उत्पादन तर्फ मोडिएका छौं। रासायनिक मल हाल्न छाडेर होम स्टे मा गोबर मल बाट उत्पादित स्वस्थ्यकर खाना खुवाउने वातावरण समेत बनेको छ।
होम स्टे ले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रसिद्दि मा खेलेको भूमिका कस्तो छ ?
सहि प्रश्न गर्नुभयो , हो होम स्टे कै कारण धेरै सतह हरु चर्चामा आएका छन्। घले गाउँ त्यसको एक उदाहरण हो। त्यस्तै पछिल्लो समय इलामको श्री अन्तु अर्को गन्तब्य बनेको छ। पहिले त्यहाँ पुग्ने मान्छे त्यहि दिन फर्कनु पर्ने बाध्यता थियो जुन हाल होम स्टे कै कारण सहज बनेको छ। अहिले मानिस हरुले ढुक्क संग बसेर सुर्योदय र सुर्यास्त हेर्न सक्ने छन्। म त भन्छु यदि तपाइले कुनै ठाउं पर्यटकीय गन्तब्य बन्न सक्ने देख्नु भएको छ भने ति स्थानमा होम स्टे खोल्नुहोस। दूरदराज का ठाउँमा तुरुन्त होटल खोल्न समस्या हुन्छ तर त्यहिँ होम स्टे खोल्न त्यतिकै सजिलो। त्यसैले पर्यटकीय स्थलको चर्चामा , बिकासमा होम स्टेको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ।
अन्त्यमा ,आधुनिकतामा धेरै नजान म सबै होम स्टे कर्मिमा आग्रह गर्दछु। होम स्टेलाइ होटल नबनाउ, होम स्टेलाइ मौलिकता तर्फ़ मोडौं भन्न चाहन्छु। आजभोली एउटा घरमा होम स्टे को बोर्ड लगाएर चल्ताफिर्ता होमस्टेहरु खुल्न थालेका छन् , त्यस्ता होम स्टे हरुलाई सम्बन्धित निकायले दण्ड जरिवाना र पुरस्कारको व्यवस्था गरोस। अर्को कुरा चाहिं कर छल्नको लागि होम स्टे दर्ता गरेर रिसोर्ट नखोल्नुस पनि भन्न चाहन्छु। अहिले पनि धेरै प्रदेशले कार्यविधि बनाएको छैन , छिटो भन्दा छिटो कार्यविधि बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कृषि र पर्यटन लाई संगै अघि बढ्नुपर्ने हामीले देखेका छौं। यसमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस।